China KN95 Uzuzu Respirator Nkpuchi Nrụpụta na Factory |VTECH
Ọcha Ntị nwere ike iwepụ P...
CE/FDA enwetara asambodo KN95 Respi...
1.Ihe mkpuchi KN95, nke na-eku ume, mgbochi uzuzu, ịdị ọcha na adaba maka iji.
2.Up ka 95% filtration arụmọrụ, a 360-degree atọ akụkụ iku ume ohere, na-enye mgbochi-uzuzu nchebe maka gị.
3.Made nke ihe dị elu, nchekwa, dị nro na ntụsara ahụ, belata mgbakasị anụ ahụ.
4.High roba band, banye ọsụsọ na ọ bụghị uko
5.Adjust curve nke aluminum imi clip na mkpịsị aka dabara, nwere ike gbanwee iji zere voids na ibelata inhalation nke na-emerụ ihe.
6.folding mkpa ngalaba, fechaa na mfe iji
Akwa mkpuchi mkpuchi nke KN95 arụnyere n'ime yaNkọwa:
2.The n'ime oyi akwa nke na-arụ ọrụ carbon nwere ike iyo emerụ gas ma ọ bụ isi.Ruo 95% nzacha arụmọrụ, oghere iku ume akụkụ 360-ogo atọ, na-enye gị nchebe mgbochi uzuzu.
5.Na imi plastik zoro ezo, mgbochi foogu, nke e wuru na akwa akwa cartilage, nwere ike gbanwee iji zere ihe efu ma belata inhalation nke ihe ndị na-emerụ ahụ.
KN95 mkpuchi mkpuchi-akwa imi mpụga nkọwa:
Electrostatic adsorption nke obere mmetọ
Gbochie nnukwu irighiri ihe ma ọ bụ uzuzu
Akpachara anya maka ojiji
1. Sachaa aka gị tupu ị na-eyi ihe mkpuchi, ma ọ bụ zere imetụ aka gị n'ime ihe mkpuchi ahụ mgbe ị na-eyi ihe mkpuchi ahụ iji belata ohere nke nkpuchi ahụ merụọ.
2. Chọpụta ọdịiche dị n'ime, n'èzí, n'elu na ala nke nkpuchi nke ọma.
3. Ejila aka kpachie ihe mkpuchi ahụ, ihe mkpuchi KN95 nwere ike kewapụ nje virus n'elu ihe mkpuchi ahụ.Ọ bụrụ na ị na-amanye ihe mkpuchi ahụ n'aka, nje ahụ ga-eji mmiri mmiri mee ihe mkpuchi ahụ, nke dị mfe ibute ọrịa nje.
4. Gbalịa mee ka ihe nkpuchi na ihu na-enwe ezigbo mmachi.Usoro ule dị mfe bụ: mgbe ị na-etinye ihe nkpuchi ahụ, na-ekupụ ume, na ikuku enweghị ike ịpụ site na nsọtụ ihe mkpuchi ahụ.
5. Ihe mkpuchi nchebe ga-adịrịrị na ihu onye ọrụ.Onye ọrụ ga-akpụ afụ ọnụ iji hụ na ihe nkpuchi ahụ nwere ike jikọta ya na ihu.Ihe ọ bụla n'etiti afụ ọnụ na pad akara na ihu ga-eme ka ihe nkpuchi na-agbapụta.
6. Mgbe emezigharị ọnọdụ nke nkpuchi dị ka ọdịdị ihu gị si dị, jiri mkpịsị aka mkpịsị aka nke aka abụọ na-agbanye imi imi n'akụkụ elu nke ihe mkpuchi ahụ iji mee ka ọ dabara na ihu.
Nke gara aga: Ihe mkpuchi ihu KN95
Osote: Ihe mkpuchi ihu 3D nwere ike ịtụfu Ntị-acha ọcha
Ihe mkpuchi iku ume Kn95
Igwe mkpuchi mkpuchi Kn95 2.5
Ihe mkpuchi Kn95 anaghị akpa
Ihe mkpuchi 3D dị nro na-eku ume PM 2.5 KN95
Ihe mkpuchi ihu KN95 5ply dị elu nwere akwa abụọ ...